Mkpakọrịta ọ bụla nke achọrọ n’etiti atụmanya nwere ebumnuche ị zụrụ na ikike ndị ahịa gị ga - enyere ha aka ịgbanwe nwere ike belata ohere ịtụgharị. Nke ahụ gụnyere oge ịzaghachi, ọnụọgụ nke clic, ọtụtụ nha ihu, nọmba ụdị ihe… ihe niile.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ka ahụmịhe ahụ dị egwu. Anyị na-eme ka ha dejupụta ụzọ tozuru etozu, anyị na-eme ha ka ha rịọ maka ozi, anyị hazigharị oge ha ga - eme ya.
Gịnị ma ọ bụrụ, na otu ubi, ị nwere ike ịgafe ngwa ngwa nke atụmanya maka onye otu na-ere ahịa ahịa na-emeghe? Naanị ị na-arịọ nọmba ekwentị ha, ndị otu ahịa ahụ na-etinye ha n'ọrụ… na enweghị nbudata ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ usoro ndị ọzọ… ha nwere ike ịmalite igosipụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị?
Ọ bụghị naanị nke ahụ, n'ihi na ha na-ekerịta nọmba ekwentị ha rank tozuo ijebu.
Nke a bụ vidiyo vidiyo nke ihe ngwọta sitere na ahụmịhe onye ọrụ na atụmanya na ahụmịhe otu onye ahịa. Ọ mara ezigbo mma!